जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ १ गते शनिबारकाे राशिफल ! - News 88 Post
शनिबार तपाईको लागि लाभदायक साबित हुँदैछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले अज्ञात स्रोतबाट धन प्राप्ति हुने सम्भावना छ। बैंकिङ्ग क्षेत्र तथा कपडा बेचबिखन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको लागि लाभको समय रहेको छ । तपाईं पनि सम्पत्ति खरिद गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको लागि शनिबार कस्तो रहनेछ हेर्नुस २०७८ माघ १ गते शनिबारकाे दैनिक राशिफल
मेष: ब्यापार ब्यवसायमा दाजुभाइको सहयोग पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथीभाइको सहयोगले कठिन कार्यहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। महिलाले घरायसी सामान किनमेल गर्नुपर्नेछ । बिद्यार्थीहरुले परिश्रम अनुसार सफलता मिल्नेछ ।
वृष: राम्रो जानकारी पाउन सकिनेछ। घरको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिशामा केही नयाँ निर्णय लिन सकिनेछ। व्यापार, रोजगारी राम्रो हुनेछ। बुवाको काममा तपाईको सहयोग प्रशंसनीय रहनेछ। कार्यस्थलमा सहकर्मीहरूले तपाईलाई ईर्ष्या गर्न सक्छन्।
मिथुन: तपाईको लागि दिन विशेष रहनेछ। मनमा केही छ भने व्यक्त गर्नुहोस् । उन्नतिको नयाँ बाटो खुल्नेछ । महिलाले आफ्नो करियरको बारेमा गहिरिएर सोच्नुपर्छ । घरजग्गा खरिदका लागि दिन राम्रो रहेको छ । पैसाको लेनदेनमा सावधानी अपनाउनुहोला ।
कर्कट: तपाईको व्यक्तित्वमा नयाँ आकर्षण रहनेछ। आफ्नो सीप र समझको साथ, तपाईंले कार्यहरू राम्रोसँग पूरा गर्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा अचानक शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्छ । अधिकारीहरूसामु आफ्नो कुरा राख्ने यो सही समय हो।
सिंह: कसैको कुरा मनमा नराख्नुहोला। काम गर्नेहरूले आर्थिक रूपमा सक्षम हुन आवश्यक छ। व्यापार व्यवसायमा उत्कृष्ट नतिजा आउनेछ । कामको सिलसिलामा गरेको प्रयासले राम्रो प्रतिफल दिनेछ ।
कन्या: शनिबार तपाईको लागि महत्वपूर्ण रहनेछ। कपडा व्यवसायीले राम्रो नाफा कमाउनेछन् । भविष्यलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। सासुरवासीसँग राम्रो कुराकानी हुनेछ। काममा सफलता मिल्नेछ । जिम्मेवारीपूर्ण काममा लापरवाही नगर्नुहोला ।
तुला: काममा राम्रो अवसर मिल्नेछ। तपाईंले आफ्नो पारिवारिक व्यवसायमा आफ्नो जीवन साथीको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकारी नियमका कारण व्यापारीहरूले केही समस्या भोग्न सक्छन् । तपाईंले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नयाँ साथी बनाउनुहुनेछ।
वृश्चिक: अज्ञात स्रोतबाट धन आर्जन हुन सक्छ। नयाँ परियोजनामा ​​काम गरेर धेरै कुरा सिक्न सकिनेछ। युवाहरूलाई उच्च शिक्षाको राम्रो अवसर छ। अभिभावकसँग किनमेल गर्न जान सकिन्छ।
धनु : तपाईको सकारात्मक सोचले परिवारका सदस्यहरु खुसी रहनेछन् । बैङ्किङ क्षेत्रका काम गर्नेहरूका लागि लाभको समय छ । कुनै पनि सम्पत्ति सम्झौता पेन्डिङ छोडिएको छ अब लाभदायक महसुस गर्न सक्छ। सन्तानबाट मन सन्तुष्टि मिल्नेछ।
मकर: भगवानको कृपाले तपाईका लागि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जीवनसाथीको सहयोगले सम्पत्तिमा हात हाल्न सकिनेछ। समयको सदुपयोग गर्नाले फाइदा हुनेछ । खर्च कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। घरायसी काममा सहयोग मिल्नेछ ।
कुम्भ: आफूले गरेका कामबाट मन खिन्न हुनेछैन। कुनै विशेष विषयमा तपाईको सोचमा परिवर्तन आउन सक्छ। आम्दानी बढाउने केही राम्रा अवसरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन लेनदेनमा सावधान रहनुहोस्। बिद्यार्थीहरुले करियरमा सफलता मिल्नेछ ।
मीन: शनिबार नयाँ काम गर्न मन लाग्नेछ। आफ्नो पराक्रम र साहसको बलमा धन कमाउन सकिनेछ। युवाहरूले करियरसँग सम्बन्धित नयाँ जानकारी प्राप्त गर्नेछन्। विगतमा भएका घटनाहरूबाट मात्र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। अनावश्यक समस्याहरू नियन्त्रण हुनेछन्।
पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता [सहमतिपत्रसहित]
April 2, 2022 N88
केपी ओलीमाथि मन्त्री झाँक्रीले ‘बाँण हानिन्’ !
December 15, 2021 N88
एमसीसी बारे मिलेमताेमा निर्णय गर्दै सत्ता गठबन्धन
December 17, 2021 N88